Inkqubo ye-Beijing Zohonice Beauty Equipment Co., Ltd.
Iqela lethu leNkxaso yezobuGcisa lilapha kuwo onke amanqanaba endlela ngenkonzo ephezulu yokuphendula eyenzelweyo yokuqinisekisa ukusebenza kwemihla ngemihla kwitekhnoloji yonyango yakho ihlala isebenza ngokusebenza okuphezulu. Inkxaso yethu yezobuchwephesha ikwathetha ukuba sikugubungele kwimeko enqabileyo kukho ukungasebenzi kakuhle kwezobuchwephesha, okukuvumela ukuba uqhubeke neshishini njengesiqhelo kunye nokuphazamiseka okuncinci kusuku lwakho. Ukuba ukhe uzive ungaqinisekanga ngamanyathelo oza kuwathatha ngokubhekisele kwizixhobo zakho zobuhle, biza nje iqela lethu - sisoloko silapha ukunceda.
Izibonelelo zenkxaso yobuchwephesha
Ukufikelela kwinkxaso yefowuni esekwe eMelbourne
Iinjineli ze-1.Local esandleni ukunceda iAustralia ngokubanzi
Ukuthunyelwa kwemini enye kwizixhobo zemboleko
3.Ukufikelela kuseto kunye nokusombulula izikhokelo zevidiyo
Iinkonzo zokufumaneka kwe4
Ukuqhuba ishishini lobuhle eliyimpumelelo akukho smalt feat kwaye iza nesabelo sayo esifanelekileyo sovuyo, kunye nemiceli mngeni. Inkonzo yethu ebalaseleyo yenkxaso yeklinikhi yindlela yethu yokukunceda ukuba ulawule kakuhle imisebenzi yemihla ngemihla yesalon yakho, i-spa, iklinikhi okanye ukuziqhelanisa ngelixa uxinzelelo lwe-mini lungekho, imveliso engekho kwimveliso kunye nokuqinisekisa iinkqubo zeklinikhi zenziwa ngendlela efanelekileyo nesebenzayo. Ukuba ukhona umhla apho uziva ungaphezulu kwentloko yakho. kutheni ungabizi iqela lethu lenkxaso yezonyango ngengcebiso encinci yeengcali?
Izibonelelo zenkxaso yezonyango
1. Inkxaso yemveliso efanelekileyo ifumaneka ngefowuni kunye ne-imeyile.
Iiprotokholi ze-2 zonyango zokuqhutywa kakuhle kweenkonzo zakho zobuhle
3.Ukufikelela kwiifom zokubonisana, iifom zemvume kunye nemfundo yesigulana
4.Ukufikelela kumaphepha ophando lwezonyango kunye nezikhokelo zomzimba wolusu
5.Sebenzisa iividiyo zethu zenkxaso, iindlela zonyango kunye nokunye okuninzi
KwiZohonice Beauty Co.Ltd., Sibandakanya inkqubo yoqeqesho ekumgangatho wehlabathi ngokuthenga isixhobo sakho nokuba ngumatshini we-IPL. Ukususwa kwe-YAG Laser tattoo okanye izixhobo zokususa iinwele. Oku kukuqinisekisa ukuba uvuka kwaye usebenze ngokuzithemba xa usenza unyango lwakho olutsha, ekuvumela ukuba unikezele ngeyona nkonzo ibalaseleyo kubathengi bakho ethi yona ikhule ngakumbi ekunyanisekeni kwabathengi kwaye inzuzo engcono iphumeze ishishini lakho kwangoko kwaye ixesha elide ukubaleka.
Izibonelelo zoqeqesho lwesixhobo
1 Inkqubo igubungela ithiyori. uqeqesho olusebenzayo kunye nokubonisana
2. Funda kwabaqeqeshi bethu abaziingcali, abaqeqeshi bezeshishini
3. Konwabele ukufunda kwiindawo zethu zoqeqesho eziqaqambileyo, zale mihla
4. Ukuqinisekiswa kwentatho-nxaxheba ebonelelweyo ukugqitywa
Iiseshoni zokuqeqesha kwakhona ezifumanekayo ukugcina imigangatho yenkonzo
Kunye noqeqesho lwezixhobo kunye nenkxaso yezobugcisa eqhubekayo. Siva ukuba ukufumana igama malunga nonyango lwakho olutsha olunomdla kukwabalulekile kwimpumelelo kunye nokukhula kweshishini lakho lobuhle. Kungenxa yoko le nto sibandakanya ukuthengisa ngokubanzi kunye nenkxaso yokwazisa ngentengo nganye yezixhobo. Izixhobo zethu zithatha yonke into ukusuka kunyuselo lwe-Facebook ukuya kwizixhobo zokwazisa ngaphakathi endlwini. Ewe, iqela lethu lentengiso likhona ukunceda ukuba uhlala ufuna ingcebiso ngendlela yokuqinisekisa ukuba ishishini lakho livela kwisihlwele.
Izibonelelo zenkxaso yentengiso
1. Ukufikelela kwimifanekiso. iincwadana ezinemifanekiso, itemplate zeflaya kunye neelayibrari zemifanekiso
2 Sebenzisa ukulungela ukuya kwimikhankaso ebhalwe kwangaphambili ye-imeyile kunye nomxholo wewebhusayithi
Izikhokelo zeendaba zentlalo kunye nomxholo we-maxi ulahlekile kukuvezwa kwakho kwi-Intanethi
4.Ukufikelela kwiimenyu zonyango, izikhokelo zamaxabiso kunye neendawo zokuthetha zabathengi
5. Ngaphambi nasemva kweetemplate zemifanekiso. iividiyo zokwazisa nokunye okuninzi